Hel iFlicks Alternative Best for Windows
> Resource > Windows > iFlicks Alternative for Windows: Ku dar metadata, Better abaabulo Lugood
iFlicks waa qalab ah oo caan ah oo inta badan loo isticmaalo ku daray metadata on Mac. Sidee ku darto metadata u isticmaala socda nidaamka Windows ah? Inta badan Softwares ka mid ah iFlicks ku salaysan yihiin Mac OS. Waxaa laga yaabaa in aad ku qaatay bilood ee Axadda si aad u hesho kale iFlicks ah u Windows. Hadda waxaad xaq halkan ku sugan yihiin. Nasiib wanaag, Waxaan helay iFlicks ee kale Windows in laydin sii dari metadata u videos.
Wondershare Video Converter Ultimate ( Video Converter Ultimate for Mac ) wuxuu noqon karaa doorashada ugu fiican ee aad, marka ay timaado Alternative ah in iFlicks for Windows. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku darto metadata in aad videos ku qasabno yar oo leh user interface saaxiibtinimo. Sidoo kale waxaa la dhaqmeen karaa sida editor metadata u Lugood ah, samaynta aad si fudud shakhsiyeeyo metadata gacanta.
Sida loo isticmaalo Tani iFlicks Alternative for Windows
Halkan waa tutorial kooban si ay u isticmaalaan this iFlicks Alternative for Windows. Wondershare Video Converter Ultimate Ayaa interface si fiican filaayo. Xataa bilaabayso, waxaad si deg deg ah ku ogaan doonaa sida ay u yaqaaniin codsigan. Fadlan akhri 4 tallaabooyinka hoos ku qoran. Haddii aad raadinayso kale iFlick ah Mac, fadlan riix halkan .
1 dar files galay iFlicks Alternative for Windows
Fadlan abuurtaan hore software ah. Ka dibna riix "Add Faylal ay" si ay u dajiyaan videos in software this. Sidoo kale waxaad si toos ah jiidi karaan iyo hoos u dajiyaan videos.
2 Set Device Apple sida Qaabka Output
Riix badhanka arrow hoos "Qaabka Output" in ay arbushin ilaa suuqa kala Output Qaabka ah, guji "Device" icon, guji "Apple" si aad u dooratid qalabka Apple, sida iPhone, iPad, ama Apple TV. Sidoo kale waxaad riixi kartaa "Qaabka" icon si ay u dejiyaan M4V sida qaab wax soo saarka.
3 dar metadata arrintan iFlicks Alternative
Riix icon this si arbushin ilaa uu furmo suuqa wax kaqabashada metadata ah. Haddii aad keeno filim ama TV show ah, kaliya ku qor magaceeda, ka dibna riix "baadh". Tani iFlicks Alternative for Windows eegi doonaa, waayo, metadata si toos ah, sida jilayaasha, agaasimaha, qorayaasha, sharaxaad iyo iwm dibna riix "OK" badhanka si loo badbaadiyo. Metadata tafatirka sidoo kale waa la heli karaa.
4 nidaameed metadata gal Lugood
Ka dib markii ay ku daray metadata, fadlan riix "Beddelaan" badhanka hoose oo ka mid ah codsiga . Your gediyay videos waxaa laga heli doonaa adigoo riixaya "Folder Open" button. Markaas wareejiyo iyo nidaamka aad la gediyay videos la Lugood aad. Sidoo kale videos la kala saari doonaa sida ay Lugood category ay. Waxa aad dhakhso u arko kartaa video by ay metadata iyo waraaqaha. Ciyaaro videos in aad qalab Apple noqon doono inta badan ka sahlan oo fudud.
Sida loo dar, Edit wmv metadata for Windows / Mac (Yosemite ka mid ah)
6 Siyaabaha crack Windows XP Maamulaha Password
Software Muqaal for Windows 8: Samee adiga kuu gaar ah iyo Muqaal
Windows 7 burburtay (Blue / Screen Black, hakinta, Rebooting, iwm)
Sida loo crack Windows 7 Password